Madaxweynaha Hirshabelle oo goor dhow ka degay Belad weyne +Sawirro | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Madaxweynaha Hirshabelle oo goor dhow ka degay Belad weyne +Sawirro
Madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali C/llaahi Cosoble iyo wafdi uu horkacayo ayaa gaaray magaalada B/weyne ee gobolka Hiiraan.
Cali C/llaahi Cosoble ayaa safarkiisa magaalada B/weyne waxaa uu ka dambeeyey ka gadaal markii uu magaalada Muqdisho kulamo kula yeeshay madaxda sare ee dowlada iyo wakiilada beesha caalamka.
Qaban-qaabo lagu soo dhoweynayey madaxweyne Cali C/llaahi Cosoble ayaa ka socotay illaa saaka magaalada B/weyne, iyadoo amaanka magaalada aad loo adkeeyey.
Madaxweynaha Hirshabelle ayaa lagu wadaa inuu magalada B/weyne kulan kula qaato Ugaaska beesha Xawaadle Ugaas Xasan Ugaas Khaliif oo si weyn uga soo horjeeday shirka Jowhar ee lagu dhisay maamulka Hirshabelle.
Wararka ayaa sheegaya iney socdaan dedaalo ugaaska loogu qancinayo inuu kaga qeyb galo xaflada caleemo saarka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulka Hirshabelle oo Jowhar ka dhaceysa maalmaha soo socda.
Siyaasiyiin xog ogaal ah ayaa sheegaya in Ugaaska Xasan oo keligiis ka soo haray odayaashii ku mowqifka ahaa uu markan ka soo debcay mayal adeygii looga bartay, uuna wato shuruudo aan sidaa u weyneyn, waxayna xuseen in doorashada madaxweyne Cali C/llaahi Cosoble oo reer Hiiraan ah ay Ugaaska dhabarjab ku riday.